Nepal Deep | वकिलहरुले मागे गृहमन्त्रीको राजीनामा, शम्भु भन्थे- हामीले राजिनामा मागे पछि नदिने को?
वकिलहरुले मागे गृहमन्त्रीको राजीनामा, शम्भु भन्थे- हामीले राजिनामा मागे पछि नदिने को?
काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनका आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको राजीनामा मागेका छन्। आफूहरुको आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै बारका कानुन व्यवसायीहरुले गृहमन्त्री खाँणको राजीनामा मागेका हुन्।
बारका उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले सर्वोच्च परिसरमा दंगा प्रहरी परिचालन गरिएको र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेको भन्दै गृहमन्त्री खाँणको विरुद्धमा नारा लगाएका थिए। उनले ‘गृहमन्त्री राजीनामा देऊ’ भनेर नारा लगाएपछि आन्दोलनकारी वकिलहरुले त्यही नारा घन्काएका थिए।
केही दिन अघि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा मागेका थिए। उनले बारले र वकिलहरूले राजीनामा मागीसकेपछि राजीनामा नदिने को हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हामीले सम्मानपूर्वक राजीनामा मागेका हौँ। बारले मागिसकेपछि राजीनामा नदिने तपाईँ को हो?’
त्यसै सन्दर्भमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा बारले र शम्भु थापाले राजीनामा मागीसकेपछि जो कोही राजिनामा दिन अभिसप्त हुने भन्दै गृहमन्त्रीले पनि तुरुन्तै राजीनामा दिनु पर्ने भन्दै व्यंग्य गर्न थालिएको छ।